Home Wararka Guddiga doorashada dadban ee Puntland oo laga sugayo lixdii kursi ee u...
Guddiga doorashada dadban ee Puntland oo laga sugayo lixdii kursi ee u dambaysay
Guddiga hirgelinta doorashada heer Puntland ayaa laga sugaya in ay shaaciyaan doorashada lixdii kursi ee u dambaysay golaha shacabka. Doorashada lixdaas kursi ayaa lagu wadaa in ay Garoowe ka qabsoonto todobaadka soo socda.
Kursiga Hop#199 ee laga soo doorto Gobolka Mudug oo ay u sharraxan yihiin dad kala duwan ayaa ugu hadal-hayn badan kuraasta harsan. Dowladda ayaa doonaysa in kursigaas Hop#199 shakhsi gaar ah loo xiro balse isinka Beesha ayaa raba in lagu tartamo Guddiga ayaa horay u qabtay doorashada 31 kursi oo kamid ah xubnaha golaha shacabka ee laga. soo doorto Puntland.
Previous articleSEIT Hir-Shabeelle oo Baladweyne ku qabanaya xulashada HOP#010, HOP#030 & HOP#066
Next articleUS strikes al-Shabab in lead up to Russia’s war on Ukraine
Masuul ka tirsanaa Maamulka gobolka Banaadir oo Muqdisho lagu dilay